Igwefoto onyunyo na Shabbat - Rabbi Michael Avraham
Igwefoto onyunyo na Satọde
Nzaghachi > Atiri: Halacha > Igwefoto onyunyo na Satọde
Paini Ajụrụ ya afọ 6 gara aga
Ị chere na a machibidoro iwu ịgafe n'ihu igwefoto na-esote okporo ụzọ na Satọde, ma ọ bụ n'ihu ọkụ ọkụ na-enwu site na okporo ụzọ, na-eche na enweghị m mmasị na ịgbanye ọkụ ma ọ bụ ịgbanye igwefoto.
mikyab Ndị ọrụ Zara afọ 6 gara aga
Ruo n'ókè m maara, ọ dịghị mmachibido iwu na nke a. Na ọtụtụ ndị emesoworị ya (dịka ọmụmaatụ na Shevet Halevi responsa na ndị ọzọ). Lee ọmụmaatụ ebe a:
Mmmmmmmmmmmm Zara 6 afọ gara aga
Ajụjụ n'otu ọnọdụ ..
Kedu maka ịgafe ihe nchọta olu nke sistemu mkpu mgbe sistemụ ahụ kwụsịrị?
Sistemụ gbanyụọ = ihe nchọta na-arụ ọrụ yana ọkwa mana sistemụ agaghị ada mkpu dịka ọ nọ na ọnọdụ njikere. Ihe nchọpụta ahụ bụ ikuku na-enweghị ike ịnyefe na-enweghị ohere ntinye, yabụ enweghị ike ịgbanyụ ya site na sistemụ kama ọ bụ naanị site na iwepu batrị.
Michi Ndị ọrụ	Zara 6 afọ gara aga
Kedu ihe dị iche? dị ka n'elu.
Mmmmmmmmmmmm Zara 5 afọ gara aga
Dị nnọọ nkọ ajụjụ.
Nke a pụtara na onye nchọta na-arụ ọrụ ma na-ebufe oge ọ bụla ị gafere ya, mana sistemụ mkpu anaghị azaghachi onye na-ebufe ya.
Ọ bụ ihe nchọta arụnyere n'ụlọ m na m nwere ike na ụkpụrụ tupu Saturday ọ bụla kpuchie ihe nchọpụta / wepụ batrị.
Naanị ihe dị iche bụ na enwere m nhọrọ iji dozie nsogbu ahụ. Ajụjụ bụ ma nsogbu a ọ dị mkpa.
Michi Ndị ọrụ	Zara 5 afọ gara aga
Ọ bụrụ na onye nchọta ahụ teta ma ọ naghị ebufe ihe ọ bụla, ahụghị m ihe kpatara m ga-eji na-echegbu onwe m. N'uche nke m, ọ dịghị mmachibido iwu na nke a. Rabbi Rabinowitz megharịrị na mgbe ị na-ahụghị nsonaazụ ozugbo maka ime ihe, ọ bụghị ihe a machibidoro iwu (maka kaadị na-emepe ọnụ ụzọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Shabbat), na nke ahụ bụ mgbe enwere nsonaazụ (ọnụ ụzọ na-emepe) mana ahụghị nsonaazụ nke ịnyefe. kaadị ahụ. Nke a bụ ihe ọhụrụ nke m na-ejighị n'aka na m kwenyere. Ma, ebe a, e nweghị pụta mgbe nile (na ọ bụghị nanị na-adịghị ahụ ha) otú ahụ ka m na-adịghị ahụ mkpa ka njọ.
Moshe Zara 5 afọ gara aga
Echere m na ị kwesịrị ịgbanwuo ihe nchọta naanị ụbọchị ị na-anọghị n'ụlọ. O doro anya na ọ bụghị?
Soro ndị ndebanye aha 3,089 ọzọ
Ebe etiti n'ime ahụ nwere ngwụcha akụkụ atọ
'Onye ukwu' kwuru na onye njikwa na-akwaga na ụbụrụ ga-atụfu ụwa ọzọ. Nke a ọ̀ dị njọ?
Aro: Akwụkwọ na nyocha echiche
Izu igwefoto ntuli aka
The cosmological arụmụka na nnukwu bang
Dr. Patricia Marie Gbanye Na mkpado na mkparịta ụka, ma ọ bụ: Abụ m onye Epicurean? (Isi nke 74)
AA Gbanye Azịza nye 'nnukwu' kwuru na onye njikwa na-akwaga na ụbụrụ ga-atụfu ụwa ọzọ ya. Nke a ọ̀ dị njọ?
Ọnụ mma agha Gbanye Azịza maka arụmụka cosmological na nnukwu ụda
A' Gbanye Azịza nye aro: Akwụkwọ na nyocha echiche
O nwekwara nsogbu na onye ọka iwu izugbe Gbanye Azịza maka arụmụka cosmological na nnukwu ụda